Agba Yellow 180, Akara Oroma 64, Mgbaze Red 135 - Agba Oke
Tọrọ ntọala na 2004, Agba Kachasị achacha agba na agba agba agba agba agba agba. Ugbu a, anyị na-enye ọtụtụ ụdị agba eji eji plastik, mkpuchi na inks. N'ime afọ iri gara aga, anyị ji obi anyị niile na-ejere ndị ahịa anyị ihe karịrị mba 30 ozi, ọkara nke ọkara ahịa anyị sitere na Europe. N'inwe ahụmịhe afọ iri nke agba plastik, anyị nwere obi ụtọ ịkọrọ ndị ahịa niile ihe ọmụma anyị banyere agba na ngwa anyị. Anyị nwekwara ụzọ nyocha pụrụ iche na ọrụ ijikọ agba iji gboo mkpa dị iche iche ahaziri.
SPC & Agba Masterbatch
Malite na 2004, a na-arara Agba Agba maka agba maka ụlọ ọrụ metụtara plastik ihe karịrị afọ iri. Anyị na-enye ndị ahịa anyị agba dị iche iche maka plastik, eserese na mkpuchi, inks na eriri sịntetik. Ọzọkwa, ọrụ anyị karịrị agba.
Anyị mmepụta ọnụ ọgụgụ nke ihe mgbaze dyes bụ na China si elu 3. Na anyị melite enyemaka na-arụ ọrụ na masterbatches na agba ibe wdg Anyị bụ ndị nnọọ ole na ole Single ink uche (SPC) na-emepụta na China, ezubere iche na ngwa chọrọ zuru okè FPV na elu ịta, dị ka sịntetik eriri na fim.
E wezụga agba, anyị na-arụkwa ọrụ na ngwaahịa ndị metụtara plastik, dị ka mgbakwunye / arụ ọrụ masterbatch, ngwakọta ma nyekwa ndị ahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ihe osise & mkpuchi
Ahịa Dye ugbu a na China - Ndị na-emepụta Kwụsị Inye Iwu, Ahịa Na-ebugharị Dramatically
Pricegwọ nke ịgbasa ekike e kewapụrụ ọzọ! Jiangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd., nke nwere oke mgbawa na Machị 21, nwere ikike nke 17,000 tọn / afọ nke m-phenylenediamine (nke dị n'etiti), nke bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke abụọ na ụlọ ọrụ ahụ. Shortzọ mkpirisi ...
Otu China si machibidoro iwu na mkpofu ihe mkpofu ghọrọ 'ala ọma jijiji' nke mere ka mgbalị imeghari baa na ọgba aghara
Site na nkwakọ ngwaahịa grubby nke na-ebuputa obere obodo ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia iji laa n'iyi mkpo ahịhịa sitere na US ruo Australia, mmachibido iwu China ịnakwere plastik ejirila ụwa emeela ka ndị na-emegharị ihe na ọgba aghara. Isi Iyi: AFP ● Mgbe imeghari azụmahịa dị na Malaysia ...
Kpọmkwem Agba Set Up New Masterbatch Alaka
Kpọmkwem Agba na Zhejiang Jinchun Polymer Ihe Co., Ltd now ikpokọta ma na agba masterbatch ngalaba na melite a ọhụrụ alaka ụlọ ọrụ nke na-elekwasị anya na ubi nke gbanwetụrụ plastik na masterbatch. Site na akụrụngwa dị elu na ngwaọrụ nnwale ndị metụtara, ngalaba ọhụrụ masterbatch nwere ...